Na mmechi - akuko nke iji na - azo ahia ahia ahia! | Martech Zone
Ndị dị ịtụnanya na Social Media Examiner amalitela obodo ha naanị,
Ndi Social Media Marketing Society. Ebumnuche nke Society bụ inyere gị aka ịchọpụta echiche ọhụrụ, zere nnwale na mmejọ, mejuputa usoro mmekọrịta ọhụụ na ịchọta ihe kachasị mma na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mgbe ị sonyere na Society, ị ga-enweta ọzụzụ izizi atọ kwa ọnwa nke bịara n'oge, usoro na ọkachamara. Nke a pụtara na ị ga-enwe nkuzi na-aga n'ihu ị chọrọ iji mejuputa usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụụ kachasị mkpa. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ike ịkpakọrịta na ndị ahịa ibe gị dịka gị.
Do chọkwaghị iche n ’otu ndị ọgbọ gị si agbasi mgba ike. Na Society, ị nwere ike jikọọ na ndị ahịa ndị ọzọ, kesaa ahụmịhe ma kwado ibe gị.
Nke a bụ akụkụ dị mma. Ihe niile na-ewere ọnọdụ n'ịntanetị! Emepụtara Society ka ọ dịrị mfe ma dị mfe maka ndị na-ere ahịa dị ka gị. Can nwere ike ịga ọzụzụ ọzụzụ ma soro ndị ahịa ndị ọzọ na-emekọrịta ihe site na nkasi obi oche oche gị-ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa! Gaa ebe a ịmụtakwu ihe.
Ndị otu na Social Media Examiner nọ na-arụ ọrụ maka ọnwa iri na otu iji mepụta ebe maka ndị dị ka gị - ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike na ndị nwe ụlọ ahịa na-achọ iji ọrụ ọhụụ kachasị ọhụrụ na-enweghị ọtụtụ ikpe na njehie.
Ha muru ihe kariri ndi ahia 4,500 ka ha ghota ihe ima aka ndi puru iche. Nke a bụ ihe ha chọpụtara:
You're na-arụsi ọrụ ike ma chọọ ka ị nwekwuo oge iji soro ụwa na-agbanwe agbanwe nke mgbasa ozi mgbasa ozi.
Wantchọrọ ụzọ dị mfe iji chọpụta usoro mmekọrịta ọhụụ na-eweta ezigbo nsonaazụ.
Chọrọ iwepu ikpe na njehie ma lekwasị anya n'ihe na-arụ ọrụ n'ezie, na-enweghị ịkọ nkọ na nnwale niile.
You're na-achọ uru asọmpi.
Wantchọrọ ilekwasị anya n’ihe kacha arụ ọrụ.
Ndị na-akụzi gị ga-abụ ndị ọkachamara na-eduga na mgbasa ozi mmekọrịta; ndị ọkachamara na Facebook, Twitter, LinkedIn na gafere. Onye na-enyocha Social Media nwere ohere ịbanye n'oche miri emi nke ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ga-ewetara gị ọhụụ kachasị ọhụrụ, usoro mmekọrịta dị mkpa iji nyere gị aka ịnọ na isi ndu.
Soro ndị ahịa 1000 + ibe gị ma nweta azịza ajụjụ gbasara mmekọrịta gị!
Ngosipụta: Anyị bụ ndị enyi nke ndị na-enyocha Social Media Examiner ma jiri njikọ njikọta iji kwalite mmemme na onyinye ha.
Tags: otu ahiaahia otuahia ahiaotu na-Michael StelznerSocial Media Ahịa Society